Inger Støjberg: “Waxaan jeclaan lahaa in meel jasiirad ah la iskugu geeyo dadka la diido” | Somaliska
Inger Støjberg: “Waxaan jeclaan lahaa in meel jasiirad ah la iskugu geeyo dadka la diido”
Haweeneyda wasiiradda uga ah dalkaasi Deenmark is dhexgalka iyo socdaalka, ayaa sheegtay in ay jeclaan laheyd in uu hirgalo hindisha xisbiga xajirka ah ee dalkaasi ee Dansk Folkepart ku doonayo in meel jasiirad ah la iskugu geeyo dadyowga diidmadda laga siiyo cosdigooda magangalyo ee dalkaasi.
Xisbigan ayaa soo bandhigay hindise uu ku doonayo in dadyowgaasi la iskugu geeyo jasiiradaha lama dagaanka ah ee dalkaasi, halkaas oo ay ku suganayaan in laga musaafuriyo dalkaasi. Haweeneydan ayaa sheegtay in ay u riyaaqsan tahay fikiradaas. Wareeysi ay siisay shabakadda Berlingske ee dalkaasi ka soo baxda ayey u sheegtay in jasiiradahaasi lama dagaanka ah oo la iskugu geeyo dadyowga diidmadda la siiyey ay noqoneeyso mid qarash xoogan ku kaca. Waxeey sidoo kale sheegtay ineey soo dhaweeneyso fikrado kasta oo wanagasan oo lugu xakameeyn karo dadkaasi islamarkaasina dalka looga musaafurin karo.
Dhinaca kale waxaa ay carabka ku adkeeysay in arrintani ay leedahay culeeyskeeda gaarka ah marka la eego sida ficil ahaan u dhaqan geli karo, taasoo bey tiri in qofka oo dalka laga musaafuriyaa ka dhib yar tahay. Bilowgii bishii sibteembar ee sanadkan ayaa waxaa dad gaaraya 921 ruux loo diiday sharciga daganaanshaha dalkaasi. Kala bar dadkaasi ayaan weli suuragal noqon in dalka laga musaafuriyo.
Haweeneydan waxaa ay ka mid tahay shaqsiyaasadda siyaasiinta lugu sheego ee dalkaasi xilka dowlo ka haya misna si ka baxsan masuu’liyad iyo xilkasnima u hadla, waxeey inta badan caan ku tahay naceybka ay u heeyso dadka muslimiinta ah. Dhawaan ayey aheyd markii ay barteeda facebook si aan ka fiirsasho laheyn u soo dhigtay sawir kartoon ah oo oo horey lugu ihaaneyeey nabigeenna Muxamed ah NNKH.
“Gacanyarayaasha laanta Socdaalka ayay u diideen in ay hoteelka ka baxaan”